လွယ်ကူသောအိမ်လုပ် Granola (သင်အကြိုက်ဆုံးများကိုထည့်ပါ) - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဘယ်လိုအိုးတစ်လုံးထဲမှာ goulash လုပ်နိုင်လဲ
အိမ်လုပ် granola သည်လုပ်ရလွယ်ကူပြီးအရသာပြည့်ဝသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ အခွံမာသီး၊ အစေ့များသို့မဟုတ်သစ်သီးခြောက်များ (သို့မဟုတ်ချောကလက်ချစ်သူများပင်) နှင့်အတူဤအခြေစိုက်စခန်းကိုအသုံးပြုပါ။
Granola သည်နို့နှင့်ဒိန်ချဉ်နှင့်မနက်စာများစွာစားသည်။ ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောသရေစာ -on-the-go ပဲ!
တစ် ဦး ရှာဖွေတာထက်ပိုပြီးနှစ်သိမ့်ဘာမျှရှိပါတယ် အိမ်လုပ် granola ဘား တစ် ဦး နေ့လည်စာကိရိယာအစုံသို့အောင်းနေနိုင်ပါတယ်!
Granola သည်အခွံမာသီး (ပြည့်ဝသောအဆီများ) နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ပိုက်ဆန်လျှော်သောမုန့်ညက်သည်အိုမီဂါ3လူတိုင်းရှာဖွေနေသောလူများစွာ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
OATS ဤစာရွက်တွင်လှိမ့်ထားသောသို့မဟုတ်“ ဟောင်းနွမ်းသော” အုတ်များလိုအပ်သည်။ ဤအ Oats granola များအတွက်အကောင်းဆုံး texture ရှိပါတယ်။
ဆီ ငါတို့ကဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီသုံးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အရသာနည်းတဲ့ဆီမို့ဒီစာရွက်ထဲမှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်။ အုန်းဆီကိုသုံးပါသို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအတွက်စပျစ်သီးဆီကိုကြိုးစားပါ။
ဘလူးဘယ်ရီ, ချယ်ရီသီး, ရက်စွဲများသို့မဟုတ်စပျစ်သီးပျဉ်ကဲ့သို့အခြောက်လှန်းအသီးကိုသီးကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြပြီးအကြီးအရသာ။ အပူပိုင်းဒေသကိုအုန်းသီးခြောက်၊ သွေ့ခြောက်ပြီးဖြတ်တောက်ထားသောသရက်သီးသို့မဟုတ်ပင်ညွန့်ပင်နှင့်ပေါင်းစပ်ပါ။
မည်သည့်အခွံမာသီးမဆိုဤ granola တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ သီဟို,်သီး၊ ပဲစေ့၊ ဗာဒံသီး၊ မြေပဲ။
granola အေးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ချောကလက်၊ ကိုကိုးအမှုန့်သို့မဟုတ်ချောကလက်အမည်းများပေါင်းထည့်နိုင်သည်။
blueberries အခြောက်လှန်းခြင်း၊ ဗာဒံသီး၊ ဂျင်းစေ့၊
cranberries, pecans, ဖရုံသီးအစေ့
ပန်းသီးခြောက်၊ သစ်ကြံပိုး၊ ပဲစေ့၊ စပျစ်သီးပျဉ်၊ နေကြာစေ့တို့ဖြစ်သည်
macadamia အခွံမာသီး, နာနတ်သီးသရက်သီးသို့မဟုတ်သရက်သီး, အုန်းသီးကြီးမားသော
သစ်သီးခြောက်၊ ဗာဒံသီး၊ လိမ္မော်သီး
အိမ်လုပ် Granola လုပ်နည်း
အိမ်လုပ် granola အားလုံးအချိန်မရွေးအတူတကွလာပါတယ်။
မီးဖို Preheat နှင့်ဒယ်အိုးပြင်ဆင်ပါ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးအတူတကွရောမွှေပါ ( အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရွက်နှုန်းဖြင့်) သွေ့ခြောက်သောအသီးမှလွဲ။
အိမ်လုပ် Granola နှင့်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
အိမ်လုပ် granola ကိုများစွာသောအရာများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အမှုတော်ကိုထမ်းရွက် သီးနှံအဖြစ် နံနက်ယံ၌နို့နှင့်အတူ။
ဒါအမှုတော်ကိုထမ်းရွက် ဒိန်ချဉ်ကျော် , ထိပ်ပေါ်မှာလတ်ဆတ်သောသီးသို့မဟုတ်အခြားအသီးနှင့်အတူ!
အသီးပေါ်မှာထည့်ပြီးအမြန်ယူပါ အသီးပြတ်သား ။
granola ကိုမြေပဲထောပတ်ချစ်ပ်များ၊ ချောကလက်ကုလားထိုင်များ၊ marshmallows များသို့မဟုတ်ရောနှောထားသောအခွံမာများ၊ ငရုတ်သီးများ၊ yummy လမ်းကြောင်းရောနှော !
အိမ်လုပ် granola သည်လတ်ဆတ်သောအခန်းအပူချိန်တွင် (သို့) ရေခဲသေတ္တာတွင်နှစ်ပတ်အထိနေလိမ့်မည်။ ငွေ့ရည်ဖွဲ့သို့မဟုတ်အစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားရန်လေလုံကွန်တိန်နာကိုသုံးပါ။
ရေခဲသေတ္တာ Granola သည်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်လပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းထားသည်။ နေ့စွဲနှင့်အတူတံဆိပ်ကပ်ဇစ်အိတ်ထဲမှာထားပါ, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး ချင်းစီဝေမျှအတွက်အရက်ဆိုင်အေးခဲ။
လွယ်ကူစွာညအိပ်ပြင်သစ် Toast - ဒါအရသာ
ဂန္ထဝင်နံနက်စာအသားညှပ်ပေါင်မုန့် - အိမ်လုပ်ဆော့စ်နှင့်အတူ
Make-Ahead ဥ Muffins - အနိမ့်ကာဗွန်မနက်စာ
နေ့ချင်းညချင်းဝက်အူချောင်းနံနက်စာ - ကြယ် ၅ ပွင့်စာ
Burritos နံနက်စာ - ရေခဲသေတ္တာဖော်ရွေ
သင်၏မိသားစုသည်ဤအိမ်လုပ် Granola ကိုနှစ်သက်သလား။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထားခဲ့ပါ။
ပြင်ဆင်ချိန်၁၀ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၃၅ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်လေး မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၁၈ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson အိမ်လုပ် Granola တွင်အခွံမာသီးများနှင့်မျိုးစေ့များ၊ ပီကေသီးများနှင့်ချိုသောအရသာရှိသည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၃ ခွက် Oats လှိမ့်
▢1 ¼ ခွက် အုန်းသီး
▢1 ¼ ခွက် ကုန်တယ်အခွံမာသီး သီဟို,်ပိုင်ရှင်များ၊
▢⅓ ခွက် အစေ့ ဖရုံသီးသို့မဟုတ်နေကြာ
▢¼ ခွက် မြေဆီလွှာပိုက်ဆန်အမြိုးအနှယျ မလုပ်မနေရ
▢½ ခွက် မေပယ်ရည် ဒါမှမဟုတ်ပျားရည်
▢1 ½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သစ်ကြံပိုးခေါက်
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ဖရုံသီးပိုင်အမွှေးအကြိုင် ဒါမှမဟုတ်ပန်းသီးပိုင်အမွှေးအကြိုင်
▢၁ ခွက် စပျစ်သီးပျဉ် သို့မဟုတ် cranberries သို့မဟုတ် blueberries အခြောက်လှန်း
မီးဖိုကို 300 ° F အထိအပူပေးပါ။ သားရေစာစက္ကူပါသောဒယ်အိုးကြီးကိုတန်းစီပါ။
ပြင်ဆင်ထားသည့်ဒယ်အိုးထဲသို့ပျံ့နှံ့ပြီးမိနစ် ၃၀ မှ ၄၀ ထိသို့မဟုတ်ရွှေမွှေးပါ။
မီးဖိုကနေ Remove နှင့်စပျစ်သီးပျဉ်အတွက်နှိုးဆော်။ ဒယ်အိုးအပေါ်လုံးဝ Cool ။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်6ခွက်ကြာပါသည် အရောအနှောပူနွေးနေစဉ်အခြောက်လှန်းထားသောအသီးများကိုရောစပ်ပါ။ granola ၏ကြီးမားသောအတုံးအဘို့အ spatula ၏နောက်ကျောနှင့်အတူအရောအနှောကိုနှိပ်နှင့်အအေးခွင့်ပြုပါ။ သရေစာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သီးနှံအဖြစ်လည်းကောင်းသော်လည်းကောင်း၊
သော့ချက်စာလုံးအကောင်းဆုံးအိမ်လုပ် Granola၊ granola စာရွက်၊ အိမ်လုပ် Granola၊ granola လုပ်နည်း၊ အိမ်လုပ် granola မည်သို့လုပ်ရမည် သင်တန်းနံနက်စာ၊ သရေစာ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။